Ny androaniko | Aprily 2016
[Fahatsiarovana ] 04 Aprily, 2016 21:02
Hafatra ho an'ny namana iray eto amin'ny blaogy.
Kivy be foana aho rehefa handray ny blaogiko fa toa araky ny tenin'lay "Bandy Maditra Be" iry hoe mitady ho lasa "nécrologie" izy izany. Nefa androany dia tena eto ihany no tiako hampitana ity vetsovetsom-poko ity.
Ankona tanteraka indray aho manko nahazo fanontanian'ny namana iray tao amin'ny facebook hoe nodimandry hono akia i.... Avy dia nikoropaka nanontany namana iombonana aho, izay nanamafy ny vaovao. Efa tany amin'ny 2015 tany, hoy izy, fa nataoko dia nahalala koa ianao. Izy koa aza toa efa taorian'ny fahoriana vao nahare.
Marina fa lany ao amin'ny facebook ny androantokon'androko matetika, saingy tsy ny pejin'ny namana rehetra no asehony ao amin'ny pejy fandraisana fa zay matetika ifaneraserana ihany. Ary impiry moa aho rehefa "manadio trano" - izany hoe manala namana izay hitako hoe tsy dia misy fifaneraserana matetika mba tsy hahamaro ny namana ka tsy hahitana ireo sasany (toa itony mitranga itony) - dia rehefa tonga eo amin'ny anarany aho ka hitako hoe "mbola nanidy pejy" izy dia hoy foana aho hoe "izy tsy esorina fa tena mba namana mifampizara hatrany". Nataoko ity izy dia sahirana ka somary niato kely. Tato ho ato kosa dia ekeko fa tsy tandriko intsony hoe tena tsy tao intsony ny anarany, ka asa na nofafana tanteraka na nesorina daholo avy hatrany fotsiny izay namany tao.
Ka eto amin'ny blaogiko no hampitako amin'ilay andefimandriny androany ity hafatro ity. Ho azy sy izy mirahalahy kambana zanany. Namana ato amin'ny blaogy izy - mino aho fa mbola mandalondalo mahita ity (enga anie). Tato rahateo no nifankahalalanay vao nitohy tany amin'ny facebook ary nihitatra taminay mirahavavy. Efa ranomaso tsy miaraka amin'ny fahoriana moa izy ity ka sanatria tsy hamoha fota-mandry na hamendrofendro. Fa tiako lazaina azy fotsiny hoe tohina tanteraka aho amin'izao fotoana anoratako izao, malahelo tamin'ny fahalasanany ary malahelo ihany koa tsy nahare vaovao ara-potoana.
Misy namana virtoaly mamela diany kely ao anaty fo ao ny fandalovany na tsy hoe niara-nivary lena aza.